घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू नाइजेरियन फुटबल खेलाडीहरू फोलरिन बालोगुन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो Folarin Balogun को जीवनी उनको बचपन कहानी को बारे मा तथ्यहरु चित्रण, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुन, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवन।
यो फुटबलरको जीवन यात्रा को एक संक्षिप्त प्रस्तुति हो, आफ्नो शुरुआती दिन देखि, जब उहाँ प्रसिद्ध बने। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकालको जाँच गर्नुहोस् - फोलारिन बालोगुनको बायोको एक सारांश।
फोलरिन बालोगुनको उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ उहाँ उत्तर लन्डनमा एक रोमाञ्चक सम्भावना मध्ये एक हुनुहुन्छ। यद्यपि, केहि व्यक्तिलाई मात्र जीवन कथा थाहा छ युवा गन: फोलारिन बालोगुन। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
फोलरिन बालोगुन बाल्यकाल कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उसले उपनाम "बालोगुन्नेर" दिन्छ। फोलेरिन जेरी बालोगुन जुलाई २००१ को तेस्रो दिनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरमा जन्म भएको थियो। उहाँ गैर अमेरिकी आमा बुबा को जन्म भएको थियो।
फोलेरिन बालोगुन परिवार मूल:
अग्रेषित आमा बुबा नाइजेरिया मा जन्म भएको थियो। साथै, उनको परिवारको उत्पत्ति निर्धारण गर्न गरिएको अनुसन्धानले उसको बुबा र आमा पश्‍चिमी नाइजेरियाका रहेको कुरा पत्ता लगाउँदछ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, तिनीहरू योरूबा भाषी जनजाति हुन्, जुन पश्चिम अफ्रिकी देशको major प्रमुख जातीय समूहहरूमध्ये एक हो।
जे होस् फोलेरिनको जन्म त्यो सहरमा भएको थियो जुन कहिल्यै सुत्दैनथ्यो, उसले आफ्नो बाल्यावस्थाको अधिकांश भाग इ England्ल्याण्डमा बिताए। उनका बुबाआमाले दुई वर्षको उमेरमा अमेरिका छोडे र लन्डनमा उनीहरूको नयाँ घर बनाए जहाँ फोलारिन प्रेममय फुटबलमा हुर्किए।
हाम्रो केटा लन्डनमा हुर्केका थिए।
Folarin Balogun परिवार पृष्ठभूमि:
बालोगुनरले आफ्ना प्रारम्भिक बर्षहरूमा सहजै पाल हालेको थियो, धन्यबाद आमा-बुबाको लागि जुन उहाँसँग उत्तम चाहन्थ्यो। इ England्ल्याण्ड जस्ता बढी सभ्य पहिलो विश्व राष्ट्रमा उनीहरूको प्राथमिकताले उनीहरूको वित्तीय उछाल र उनीहरूको छोराको भविष्यको योजनाहरूको गवाही दिन्छ।
फोलेरिन बालोगुन फुटबल कहानी:
स्ट्राइकरका अभिभावकहरूको एउटा योजना थियो कि उसलाई फुटबल एकेडेमीमा भर्ना गर्ने। उसको चासो र सम्भाव्यतालाई हेरेर, तिनीहरूले खेलाडीको साथसाथै भाडा पनि पाउने थिए।
तसर्थ, उसलाई आइतवार लिग पक्ष एल्डरस्ब्रुकको लागि खेल्न अनुमति दिइयो। यसैले प्रतिस्पर्धी फुटबलमा उसको पहिलो चरण सुरु भयो।
जब बालक १० बर्षको थियो, आर्सेनलले उनलाई भेट्टाए जब Aldersbrook का लागि खेल्दै थिए। उत्तर लन्डन क्लब चाँडै उसलाई प्रतिस्पर्धी टोटेनहम प्राप्त गर्न अघि हस्ताक्षर गर्न सारियो।
“मेरो आर्सेनलमा मेरो मुद्दा चलिरहेको बेला म टोटनह्यामसँग सम्पर्कमा थिएँ जब चीजहरू दक्षिणमा जान्छन्। भाग्यवस, गनर्सले ME हस्ताक्षर गरे। म खुसी थिएँ र यो मेरो जीवनको विशेष क्षणहरूमध्ये एक थियो। ”
उनी आर्सेनलमा सम्मिलित भएको years बर्ष पछि स्ट्राइकरको फोटो।
फोलेरिन बालोगुन जीवनी - रोड टु फेम स्टोरी:
गनर हुनु युवाको बाल्यकालको सपना थियो। त्यसकारण, उनले सपनाको हरेक पक्षमा बाँचेको सुनिश्चित गर्न यथासक्दो प्रयास गरे जुन क्लबको सूचीमा प्रगतिशील बृद्धि हो।
उसको उत्थानको चरम सीमामा, बलोगुन गोल स्कोरिoring मेसिनको रूपमा लोकप्रिय भयो। उसले पहिलो टीमको सुपरस्टारसँग तुलना चित्रण गर्न शुरू गर्यो पियरे-एमिरिक एबम्हाङ र फेब्रुअरी २०१ in मा उनको पहिलो व्यावसायिक सम्झौता भयो।
२०१ who मा कसले उसको व्यावसायिक करार पायो हेर्नुहोस्।
फोलेरिन बालोगुन जीवनी - उदय:
अक्टूबरमा डुन्डलकमाथि आर्सेनलको -3-० युरोपा जितेको पहिलो चरणमा, बालोगुन खुसी थिए कि उनले आफ्नो बाल्यकालको सपना पाएका थिए। यद्यपि उसले स्कोर गरेन तर उनले टिप्पणी गरे कि पहिलो होएक क्षण म कुर्दै छु" शीर्ष उडान फूटबलमा युवाको यात्रा भर्खरै शुरू भएको छ।
उहाँ आफ्नो पहिलो भन्दा पहिले र पछाडि उच्च आत्मामा हुनुहुन्थ्यो।
Aubameyang संग, Lacazette, र Nketiah उत्तरी अमेरिका लन्डन क्लबमा उनीहरूको व्यापार चलाउँदै बालोगुनले टिमको आक्रमण टोलीमा आफ्नो ठाउँ कमाउनु पर्ने थियो। आशा छ, उहाँसँग एक कठोर कठिन मानसिकता छ र गनर्स वा अरू कुनै टोलीसँग सफलता प्राप्त गर्दछ। बाँकी उनीहरू भन्छन् कि ईतिहास हो।
फोलारिन बालोगुन प्रेमिका र पत्नी को हुन?
हाम्रो बच्चा आफ्नो बचपनको कहानी र जीवनी मा यो लेख राख्ने समयमा धेरै एक्लो छ। त्यसकारण, हामीले उनलाई कुनै सुन्दरताका साथ ह्या hanging्ग आउट गरेको देख्नु भन्दा पहिले यसले केहि समय लिनेछ जुन हामी उसलाई आफ्नै भन्न सक्दछौं। सराहना गर्दै, उहाँ परिष्करणका विभिन्न तरिकाहरू सुधार गर्ने र विकास गर्ने प्रयासमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। यदि तपाईं हामीलाई सोध्नुहुन्छ भने यो एक धेरै बुद्धिमान निर्णय हो।
फोलरिन बालोगुन प्रेमिका को हो?
फोलेरिन बालोगुन पारिवारिक जीवन:
स्कोरिंगमा उसको पहिलो आर्सेनल गोल नोभेम्बरमा मोल्डेको बिरूद्ध, त्यहाँ एक सेट थिए जो अगाडि बढि खुशी थिए। तिनीहरू उसको परिवार हुन्। हामी तपाइँलाई फोलारिन बालोगुनका अभिभावकको बारेमा तथ्यहरू दिन्छौं। साथै, हामी यहाँ उसका भाइबहिनीहरू र आफन्तहरूको बारेमा तथ्यहरू बनाउँदछौं।
फोलेरिन बालोगुन अभिभावकको बारेमा:
बालोगनर्स बुबा र आमा उहाँको जीवन र उदयको अभिन्न हिस्सा भएका छन्। उहाँ निश्चित रूपमा पर्दा पछाडि काम गर्दै हुनुहुन्छ कि यो सुनिश्चित गर्न कि उसले ध्यान केन्द्रित गर्यो र आफैलाई प्रीमियर लिगमा स्थापित गर्यो। बालोगुनले जुन गतिमा सुधार गरिरहेको छ, त्यसको बाबुआमाले आफ्ना बाबुआमाले कसरी उहाँलाई एक अद्भुत प्रतिभाको रूपमा हुर्काए भनेर अन्तर्वार्ता दिनु अघि धेरै लामो हुने थिएन।
फोलेरिन बालोगुन भाई बहनहरूको बारेमा:
बालोगुनर सम्भवतः आफ्ना आमा बुबामा जन्मेको एकमात्र बच्चा हुन सक्छ। उनले आफ्नो भाइको बारेमा केही भनेका थिएनन्। न त कुनै केटी / महिलाले आफूलाई उनको बहिनी भनेर चिनायो। के तपाईंले उनका भाइबहिनीहरूलाई देख्नुभयो? टिप्पणी बक्समा हामीलाई भन्न राम्रो गर्नुहोस्।
फोलेरिन बालोगुन सम्बन्धहरूका बारे:
खेलाडीको तत्काल परिवार जस्तै, त्यहाँ स्ट्राइकर हजुरबा हजुरआमा को रेकर्ड छैन। त्यस्तै, न त उनका काका, काकी, काकी, भतिजा र भतिजीहरू जो डिसेम्बर २०२० को महिनाको रूपमा परिचित छन्।
Folarin Balogun व्यक्तिगत जीवन:
हाम्रो डिफेन्डरको काँधमा खेल्ने प्रतिभाशाली हुनुबाहेक हाम्रो केटा को हो? हामी तपाइँको व्यक्तित्वको बारेमा तथ्यहरू तपाइँलाई उसको पूरा चित्र प्राप्त गर्न मद्दत पुर्‍याउने बेलामा बस्नुहोस्। उहाँ खुसी गो भाग्यमानी बच्चा हुनुहुन्छ जो महत्वाकांक्षालाई कसरी उचित दृष्टिकोणको साथ सन्तुलनमा राख्न जान्नुहुन्छ।
हँसाउँदा ठूलो छैन, बालोगुन एक त्यस्तो व्यक्ति हो जसको साथ तपाई रमाईलो कुराकानी गर्न मन पराउनुहुन्छ। थप रूपमा, उनको हास्य भावना उसको अघि, त्यसरी नै उनीहरूका मानिसहरू पनि सीप गर्छन्। ऊ बाहिर काम गर्न मनपराउँदछ र फन्सी लामो फुर्सतको पैदल यात्रा लिन्छ। साथै, यात्रा र परिवार र साथीहरू संग राम्रो समय खर्च आफ्नो चासो र शौक को सूची मा छन्।
के उहाँ स्ट्राइकरमा आफूले चाहेको सबै कुरा होइन र?
Folarin Balogun जीवनशैली:
२०२० मा हाम्रो केटोको मूल्य कति छ? उसको नेट वर्थ समीक्षा अन्तर्गत छ। जे होस्, यो एक खुला रहस्य हो कि उसले साप्ताहिक £ 2020 कमाउँछ। १-बर्षे उमेरले आफैंलाई फ्यान्सी कारमा प्रशिक्षणको लागि ड्राइभिंग लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ
थप रूपमा, उसले त्यस्तै साप्ताहिक भुक्तानीको साथ फेन्सी घर वा अपार्टमेन्ट वहन गर्न सक्दछ। सारांशमा, बालोगुननरलाई विलासितापूर्ण जीवनशैली बिताउनबाट रोक्न केहि छैन जुन उसले नचाहेको आशा गर्‍यो।
फोलेरिन बालोगुनको बारेमा तथ्यहरू:
बधाई, तपाईंले यसलाई टाढा बनाउनु भयो। यो आकर्षक लेखलाई समेट्नको लागि, यी तथ्यहरू छन् जुन तपाईंलाई युवाको बारेमा जान्नु आवश्यक पर्दछ।
प्रति वर्ष: £ 235,664।
प्रति महिना: £ 19,638।
प्रति हप्ता: £ 4,532।
प्रति दिन: £ 647।
प्रति घण्टा: £ 22।
प्रति मिनेट: £ 0.37
तपाईले फोलारिन बालोगुन हेर्न शुरू गर्नुभयो बायो, यो उसले कमाएको हो।
फोलेरिन जेरी बालोगुन धर्ममा ठूलो हुन सक्छ वा सक्दैन। वास्तवमा उसले आफ्नो विश्वास आफैंमा राख्छ र आफू इसाई हो कि होइन भन्ने कुनै संकेत दिँदैन। यद्यपि, विश्वासको मामिलामा उहाँ के भन्न खोज्नुहुन्छ भनेर समयले प्रकट गर्नेछ।
अन्याय कहिल्यै बालोगुनको रेटिंग्समा भए जस्तो चम्किलो कहिल्यै भएको छैन। तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि ऊसँग points० को सम्भावितताको साथ points० अ of्कको समग्र रेटिंग छ?
यो स्पष्टतः उसको क्षमताहरु को एक प्रतिबिम्ब छैन।
त्यो निश्चितले उत्कृष्ट फिनिशरको वास्तविक जीवन क्षमता प्रतिबिम्बित गर्दैन जुन मनपर्दोसँग तुलना गरिएको हो Youssoufa Moukoko। भाग्यवस, उहाँ आफ्नो भर्खरको प्रदर्शनहरू विचार गरी अपग्रेडको लागि तयार हुनुहुन्छ।
तथ्य # १ - अन्तर्राष्ट्रिय शुल्क:
के तपाईंलाई थाहा छ बलोगुन तीन देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्न योग्य छ? तिनीहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र इ England्ल्याण्ड हुन्। साथै, उसले नाइजेरियालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। यद्यपि राम्रो अवसर र प्रोत्साहनका कारण ऊ इ England्ल्यान्डको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना रहेको छ।
Folarin Balogun को बचपनको कहानी र जीवनी मा यस जानकारीपूर्ण टुक्रा पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी आशा गर्दछौं कि यसले तपाईंलाई के गर्न प्रेरित गर्दछ र तपाईंको प्रेमको लागि खडा छ। बलोगुनले आर्सेनलमा सम्मिलित हुन कोसिस गरेझैं, उसलाई असाध्यै मन परेको क्लब।
अहिलेसम्म बालोगुन गनर्सका लागि खेल्दै जान्छ, ऊ सहजै राख्दछ अगाडि पूर्ण स्टीममा hype ट्रेन। ऊ जहाँ छ उसले प्रेम गर्छ र उसलाई माया गरिदैछ। अब हामी स्ट्राइकरका बाबुआमालाई उनीहरूको वचन र कार्यहरूमा उनको क्यारियर समर्थन गरेकोमा सराहना गर्दछौं।
Lifebogger मा, हामी बचपनका कथाहरू र जीवनी तथ्या .्कहरू प्रदान गर्नमा गर्व गर्छौं नाइजेरियन मूलबाट फुटबलरहरू। यदि तपाइँ केहि पनि देख्नुहुन्छ जुन ठीक लाग्दैन भने, राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
फोलेरिन बालोगुनको विकी:
फुटबलरहरूको जीवनीको एक suick cummary प्राप्त गर्न, कृपया हाम्रो Wiki तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पूर्ण नामहरू: फोलेरिन जेरी बालोगुन।
जन्म मिति: जुलाई २००१ को तेस्रो दिन।
जन्मस्थान: संयुक्त राज्य अमेरिका मा न्यू योर्क को शहर।
सेमी मा उचाई: 178।
रुचि: यात्रा, ट्रेकिंग, परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउने।